PUBG Mobile vs Call of Duty Mobile - Fampitahana amin'ny antsipiriany - Lalao
Tao anatin'izay taona faramparany dia nanjary iray amin'ireo karazana kilalao eran'izao tontolo izao ny battle royale. Olona ana hetsiny maro no miditra isan'andro any amin'ny kaontiny ary mandritra ny ora maro dia milalao lalao royale.
Satria ny ankamaroan'ny mpamorona dia nifantoka tamin'ny tsena console / PC fotsiny, misy taratra fanantenana ho an'ireo mpilalao finday. Ny ampahany tsara indrindra dia maimaim-poana. Amin'ity lahatsoratra ity dia handinika ny titans amin'ny tontolon'ny lalao isika. Vinavinainao ho azy PUBG Mobile (Player Unknown Battlegrounds Mobile) sy Call of Duty Mobile.
Mikasa ny hilalao lalao Cross Platform? Zahao ny lisitray Lalao Cross-Platform tsara indrindra amin'ny taona 2020.
PUBG Mobile vs Call Of Duty - Topimaso
Amin'ity fizarana ity dia hiresaka momba ny topy maso ny lalao sy hanome ny antsipiriany kely momba ny lalao roa izahay. Hevero ho zava-dehibe amin'ireo fizarana hafa ity.
PUBG Mobile: Topimaso
Maherin'ny 100 tapitrisa + ny fisintomana, nanova ny ho avin'ny lalao finday ny PUBG. Nanjary fari-pitsarana hitsarana raha manana finday tsara ny telefaona. Na dia samy manana traikefa amin'ny lalao mitovy aza ny lalao roa, ny PUBG Mobile dia manana fomba hafa amin'ny lalao.
Na dia tsy tsara toy ny tantaran'ny mpilalao tokana aza izy ireo dia azon'izy ireo antoka fa hampiditra tantara vitsivitsy amin'ny vanim-potoana ady. Na izany aza, tsy mifamatotra mihitsy ny fizotran'ny tantara. Ny vanim-potoana rehetra dia manomboka amin'ny horonantsary fampidirana vaovao, ary any ianao no mandeha. Mahery vaika ny sary, ary ny gameplay dia hatramin'ny 90 FPS.
Call of Duty Mobile: Topimaso
Ny fampidinana dia mitovy amin'ny Call of Duty. Na izany aza, tonga herintaona taty aoriana tao amin'ny PUBG Mobile. Call of duty dia teo amin'ny lalao foana. Na inona na inona fironana dia fiantsoana andraikitra, ataovy izay hanarahan'izy ireo azy. Marina izany na dia amin'ity tranga ity aza. Na dia navoaka tao amin'ny PUBG Mobile aza taty aoriana, dia nanjary nalaza noho ireo mpankafy azy henjana.
Niresaka momba ity lalao ity ny olona na dia talohan'ny famoahana azy aza. Ny sary dia tsy latsaky ny PUBG Mobile. Ny mekanika lalao dia iray karazana, ary ny fiheverana ny antsipiriany dia hampilatsaka ny valanoranonao.
Eny, io no iray amin'ireo refy lehibe indrindra izay itsaran'ny olona iray lalao. Na dia samy manana ny karazany mitovy aza ireo lalao roa dia andao jerena hoe iza no tonga ambony miaraka amin'ny sary.
PUBG Mobile: sary
Ny lalao dia ahitana Smooth, Balanced, HD, HDR, Ultra HD (Ultra HD izay 4K). Raha niverina tamin'ny taona 2018 ny lalao dia tsy dia tsara loatra ireo sary tamin'izany fotoana izany. Na izany aza, miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka, nihatsara ny sary.
Nanjary nitaky fitakiana fitaovana tsara kokoa ny lalao. Noho io antony io dia voatery namoaka kinova Lite izy ireo izay nanidy ny sary. Na dia mitombo hatrany aza ny habaka mitombo ny sary dia avo indrindra eo ho eo ny tsara indrindra. Tsy dia mifantoka loatra amin'ny antsipiriany. Ity lalao ity dia manana sehatr'asa 8X izay midika fa tokony ho tsara ireo sary lavitra, saingy tsia, tsy afaka mampitombo azy ireo ny lalao, fa kosa rehefa mikaroka olona iray dia tsy maintsy manery ny masony eo amin'ny efijery izy.
Call of Duty Mobile: sary
Ny safidy sary sy ny tahan'ny endriny dia toy izao: ambany, antonony, avo, avo indrindra, Max. Ity dia iray amin'ireo sary tsara indrindra hita amin'ny lalao finday. Noho ny tantaran'izy ireo tamin'ny lalao dia tsara be ireo sary satria manana ny traikefa ananany. Mahatalanjona ny fijerena ny antsipiriany, manomboka amin'ny fahitana ireo bala manidina amin'ny ra mivoaka rehefa misy manimba ny olona.
Na dia mitifitra bala na hazo na biriky aza ianao, dia hitanao fa mipetaka ireo sombin-javatra. Ny halaviran'ny fijerena dia tsara indrindra; sniping toe-javatra dia mety kokoa ho an'ity lalao ity. Safidy toy ny halalin'ny saha, aloky ny tena izy ary fanoherana ny famakafakana azo jerena izay tsy misy amin'ireo mpifaninana aminy. Ny maody Multiplayer dia mamerina ny fahatsiarovana amin'ny lalao match 5 V 5.
Fampitahana maodely InGame:
PUBG Mobile: maody maody
Isaky ny vanim-potoana dia misy LTM vaovao vaovao natolotra. Na izany aza, PUBG dia manana laboratoara kilasika, arcade, arena ary milalao. Ny fomba roa malaza indrindra dia ny arcade sy kilasika. Amin'ny kilasika dia afaka milalao lalao laharana ianao, ary ny lalao ataonao dia mifototra amin'ny fanaovana lalao mifototra amin'ny fahaiza-manao, na izany aza amin'ny arcade tsy izany no tantara. Ao amin'ny arcade dia milalao kilalao kely ianao toa ny matchmatch an'ny ekipa sy ny ady izay tsy misy fiatraikany amin'ny laharanao mihitsy.
Ny laharana ao amin'ny PUBG dia alimo, volafotsy, volamena, platina, diamondra, satro-boninahitra, ace ary mpandresy. Rehefa mampitombo ny fahaizanao ianao dia mifindra amin'ny alimo mankany amin'ny mpandresy. Amin'ny maody mahazatra dia afaka milalao miaraka amin'ny namanao amin'ny Squads na duos ianao, raha tsy manana ianao, dia ataovy izay hahazoana antoka fa milalao ny PUBG Mobile satria manana fomba solo koa izy.
Call of Duty Mobile: maody InGame
Inona no atao hoe lalao Call of duty tsy misy maody zombie? Mizara telo ity lalao ity indrindra — Battle royale, zombies ary multiplayer. Multiplayer dia isaky ny lalao Call of duty hatrizay. Raha efa nilalao Call of duty ianao dia ho fantatrao ireto maody ireto: frontline, matchmatch an'ny ekipa, fanjakazakana, fikarohana ary famotehana. Na izany aza, manana ny safidin'ny lalao laharana na tsy laharana ianao, tsy hanakantsakana ny laharam-pahamendrehanao amin'ny ady.
Ny maody battle royale dia misy fakany mitovy amin'ny PUBG Mobile miorina amin'ny laharam-pahamehanao dia ampifanarahina amin'ny mpanohitra ianao. Ireto misy ny laharana: Rookie, Veteran, Elite, Pro, Master, Legendary. Amin'ireto laharana ireto dia ny rookie no kely indrindra, ary ny angano no avo indrindra.
PUBG Mobile: Sarintany
Misy fanangonana sarintany midadasika misy ny karazan-toetr'andro rehetra azonao eritreretina. Ireto ny anaran'ireo sarintany: Erangel, Miramar, Vikendi, Sanhok. Erangel dia tanàna ara-dalàna toa ny sari-tany ary tena ilaina amin'ny lalao battle royale. Miramar dia monina any amin'ny faritra karakaina ary Sanhok dia mifototra amin'ny toetrandro antonony. Toerana mangatsiaka i Vikendi, rakotra ranomandry.
Shanok dia sari-tany kely kokoa; noho izany azonao atao ny misafidy izany rehefa tsy manam-potoana hilalaovana ianao. Ny sarintany malaza indrindra dia i Erangel, satria avo lenta ny tahan'ny lozam-borona ary tsy azo inoana ny hidiranao amin'ny toerana mafana ary tsy hahita fandrobana ianao. Saingy, ireo sarintany ireo dia voafetra ihany amin'ny maody mahazatra; ny LTM dia mazàna misy ny kinova zombified an'ny sari-tany, midika izany fa mety misy fikajiana sasany hanovana ny fisehon'ny sarintany.
Call Of Duty Mobile: Sarintany
Ho an'ny battle royale dia tsy manana afa-tsy sarintany iray izy ireo, fa ho an'ny marobe kosa dia manana sarintany tsara izy ireo. Ity dia ho làlana an-dàlam-pahatsiarovana. Ireto ny sarintany: Cross-fire, Standoff, Crash, Killhouse, Firing range, Nuketown, Takeoff. Ireo sarintany rehetra ireo dia teo amin'ny lalao Call of duty taloha.
Na izany aza, ireo sarintany ireo dia tsy misy afa-tsy amin'ny multiplayer fotsiny, ary aza manahy; homena laharana arakaraka ny zava-bitanao ianao. Ka tsy very be ianao. Tsy koa ny mandany fotoana amin'ny lalao multiplayer dia tapitra ao anatin'ny minitra vitsy.
Basy / Loot pool fampitahana:
PUBG Mobile: Basy / Loot pisinina
Ahitana ny basy malaza rehetra manomboka any AKM ka hatramin'ny M4A1. Ny mekanika basy dia tsara miaraka amin'ny lamina famafazana marina. Ny SMGS dia hanana lamina famafazana mahitsy fa ny basim-borona kosa manana endrika fitifirana curvy; noho izany dia mila mahafehy azy ianao. Izy io dia afaka mampiroborobo ny mekanika basy izay mahatonga ny lalao ho mahafinaritra kokoa. Tsara ny spawn, ary azo inoana fa hahita basy ianao raha miantsona amin'ireo toerana mafana amin'ny sari-tany.
Ny olana fandrobana ny Ammos dia tsy olana ihany koa satria somary avo ny taham-pananahana. Na izany aza, raha sniper ianao dia avy eo misy boaty mandatsaka miaraka amin'ny AWM izay hahafaly anao. Raha fintinina dia manana zavatra ho an'ny rehetra ity lalao ity.
Call of Duty Mobile: basy / Loot pisinina
Izy ireo koa dia manana dobo fandrobana mitovy amin'ny PUBG Mobile, saingy ny fanentanana dia tsy miankina amin'ny marika. Ny ankamaroan'ny basy dia tsy manana lamina famafazana, ary mahatsapa fa mandeha foana ny tanjona kendrena. Angamba manana bots betsaka izy ireo. Na izany aza amin'ity lalao ity dia ampiasaina ny tena anaran'ireo basy, ka izany angamba no hany tombony azo amin'ny PUBG Mobile.
Amin'ity fizarana ity dia hiresaka momba ny mpandresy isika amin'ny alàlan'ny fiheverana ireo mason-tsivana rehetra noresahina tetsy ambony.
Graphics:Call of Duty Mobile.
In-Game maody: Call of Duty Mobile.
Maps:Call of duty finday.
Basy / fandrobana basy:PUBG Mobile.
Vokatr'izany Call of Duty Mobile dia mandresy amin'ity ady tsy misy farany ity. Na dia manana tombony aza ny PUBG, ny Call of duty mobile dia afaka mijoro eo an-tampon'ny rojo sakafo. Ampahafantaro anay anay hoe lalao inona no anohananao amin'ny hevitrao.
Mikasa ny hamoaka Cocomelon vanim-potoana faha-5 amin'ny fotoana rehetra ve ny Netflix?
Ny vanim-potoana faha-4 an'i Cobra Kai dia nambara tao amin'ny Netflix!
boaty fahitalavitra hijerena sarimihetsika
ny fomba famonoana ny maody azo antoka amin'ny fampiharana tumblr
fampidinana chromecast fanitarana ho an'ny pc
manao rindrambaiko kapoka anao manokana
ity tumblr ity dia mety misy haino aman-jery mora tohina. midira raha hijery
fampiharana an-trano google tsy misy fanaraha-maso an-trano
manaova hoditra minecraft anao